Fizarana kojakoja ilaina amin'ny andavanandro tao Ivato
Fizarana kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo mponina sahirana ao Ivato
"gala de charité" notohanan' i Ravinala airports
Eo amin’ny sehatra ara-tsosialy, ny asa ataon’ny Ravinala Airports dia haharitra, mifanaraka tsara sady manamafy ny tanjon’ny fananganana izay efa nataon’ny mpiara-miombon’antoka : misitraka ny fahaiza-manao mba ho tonga mpisolo tena azy eto an-toerana . Ny mpiasan’ny Ravinala Airports dia miara-misalahy amin’io daholo.
Noho ny haben’ny filàna eo an-toerana sy ny fahatanoran’ny vahoaka malagasy, dia ilaina ny mametraka politika misy tanjonaahafahana manorina ho avy tsara sy mivelatra amin’ny olona rehetra . momba ny ora, ny 3 amin’ireo sehatry ny politika ara-tsosialin’ny Ravinala Airports no voafaritra :
Fampianarana sy fanatsarana ny fiainan’ny tanora
Fanajana ny tontolo iainana manokana, indrindra ao Nosy-Be
Fanohanana ny asa ao an-toerana
Ny fampitaovana izany andraikitra izany dia atao miaraka amin’ny Fikambanana Malagasy sy ireo mpiara-miombon’antoka aminay amin’ny tetikasa voalohany : fananganana ivotoerana fandraiasana iray, fanohanana sy fanatsarana ny fianaran’ireo zaza sahirana eto Antananarivo
Ny andraikitra ara-tsosialy sahanain’ny Ravinala Airports dia hita ihany koa ao amin’ny fanomezana toeram-ponenana ho an’ireo olon tena sahirana izay mipetraka manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Beary izany dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena sy ny zon’olombelona.
Ny andraikitray eo amin’ny tontolo iainana
Ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina dia mivelatra tanteraka amin’ny fandraisana an-tanana sy fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina manodidina sy ny zava-boary. Ravinala Airport dia nandray andraikitra amin’ny fanenana ny mety ho vokadratsy ateraky ny asa ataony eo amin’ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fametrahana fomba fitantanana ny tontolo iainana, ary ao anatin’izany ny fanatsarana maharitra.
Ny andraikitray eo anivon’ny tontolo iainana
Fikajiana ny tontolo iasana :
Fananganana toby vaovao ho fanivanana ny rano avy nampiasaina ho an’ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be.
Fanasarahana ny solika rehetra mba iarovana ny fahalotoan’ny rivotra iainana.
Fanamboarana ny fanapotehana izay efa misy mba hahamora ny fanapotehana ny fako sy fanatsarana ny fikarakarana ny
Fanaraha-maso matetika ny toetran’ny rivotra, ny hahavon’ny feo, ny haloton’ny tany sy ny rano manodidina ny seranam-piaramanidina roa
Fiarovana ny zava-boary :
Mba ho fikajiana ny zavaboary izay tena tsisy toa azy eto amitsika , Ravinala Airoirt dia mametraka Fandaharan’asa ho fikajiana nyu zava-boary ao Nosy Be izay toy izao ny votoatiny :
Fananrenana ny mangrove manakaiky ny seranam-piaramanidina Fascène (eo am-panomanana).
Fananrenana ny ala (eo am-panomanana).
Fitantanana maharitra ny akoran-java-boary amin’ny alalan’ny Fikambanana Fototra ao an-toerana (eo am-panomanana)
Fanaraha-maso ara-ekolojika ireo zava-boary misy mba ahafahana mamantatra ny toetran’ilay toerana ary koa mamantantra ny mety ho vokadratsin’ny asa atao ao.
"Incinérateur" ao Ivato
STEP ao Ivato
Famindran-toerana ny tanànan’ny “Fascène Gare”
Famindran-toerana ny tanànan'ny "Fascène Gare" ho any amin'ny "Pont Valiha"
Tanàna vaovao « Pont Valiha »
Fanoloran-dRamatoa solontenan’ny Minisiteran’ny fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetrandro ireo kara-tany ho an’ny mponina
Fanoloran’Andriamatoa Sekretera Jeneraly ny Prefektiora ny kara-tany ho an’ny mponina
Fanoloran’Andriamatoa Ben’ny Tanàna ny Nosy Be ireo kara-tany ho an’ny mponina
Fitsidihana ny tanàna vaovao nataon’ireo manam-pahefana ny Nosy Be
Araky ny fifanarahana vita sonia momba ny fitantanana ny
seranam-piaramanidina eto Nosy-Be dia tokantrano 65
nonina teo amin’ny tanànan’i « Fascène Gare » no nafindra
toerana any amin’ny « Pont Valiha ».
Tanjona amin’izany ny hanalalahana ny faritra saro-pady
manakaiky ny seranam-piaramanidina.
Nanome fanampiana tamin’ny fanajariana ny tanàna
vaovao ary nanome fanonerana ara-bola mba
hananganana ny trano fonenan’ny mponina ny fanjakana
malagasy sy Ravinala Airports.
Ho fanajana ny lalàna velona sy ny fenitra takian’ny banky
iraisam-pirenena dia manohana ireo olona voakasiky ny
tetik’asa i Ravinala Airports, na amin’ny fifindrany toerana
na amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny
antom-pivelomany sy ny seha-pihariany.
Nanampy ireo mponina ihany koa i Ravinala Airports
tamin’ny fitaterana ireo akora fototra momba ny tao-trano,
ary nandefa mpiasa nanampy azy ireo tamin’ny
fananganana ireo trano vaovao eny amin’ny “Pont Valiha”.
Samy nanaiky hamita ny asa fanorenana alohan’ny 31
martsa 2019 ireo tokan-trano voakasika. Ho lasa
tompon-tany ihany koa izy ireo.